VPF andian-dahatsoratra mitsivalana takelaka fisaka-Plate Freezer-Square Technology Group Co., Ltd.
Ny vata fampangatsiahana vilia mitsangana dia mety amin'ny hatsiaka haingana ny sakafo isan-karazany, toy ny trondro, makamba, vokatra hena, sakafon'ny biby fiompy, sns. fanodinana hatsiaka ny sakafo.
◆ Fampidinana haingana sy famoahana entana. Tsy toy ny vata fampangatsiahana lovia mangatsiaka mila olombelona
miasa mba hamonosana ny vokatra ao anaty lovia, ny mpiasa dia afaka mandatsaka ny vokatra betsaka
mivantana mankany amin'ny habakabaka eo anelanelan'ny takelaka. Aorian'ny firehitry ny vokatra dia ho afaka ireo sakana mangatsiaka
hakarina avy amin'ny takelaka amin'ny alàlan'ny fork hydraulic.
◆Ny vata fampangatsiahana vilia mitsangana dia tena mahomby tokoa noho ny fotoana hatsiaka fohy.
◆vita amin'ny vita amin'ny vy mandriaka mafana-milentika amin'ny ranomasina. Ny vy vy
azo zahana ihany koa ny frame.
◆Malalaka ny velaran-takelaka ary mifono PTFE ny forza hisorohana ny vokatra
fahasimbana na rangotra.
◆Ny vata fampangatsiahana dia afaka miara-miasa amin'ny Freon, Ammonia na CO2.
modely L1 L2 W1 W2 H1 H2
* Mari-pana Infeed: + 15 ℃, mari-pana outfeed: -18 ℃, maripana mangatsiaka: -35 ℃, fotoana mangatsiaka mifototra amin'ny trondro feno hatsiaka
Ny vata fampangatsiahana vilia mitsangana dia ampiasaina hampihenana ny vokatra ao anaty sakana amin'ny sambon'ny mpanjono na an-tanety. Izy io dia mety amin'ny sakafo betsaka toy ny trondro, hena ary legioma, na sakafo misy ranoka toy ny ranom-boankazo, ronono, pulp sns.